Ngilivula kanjani ifayela le-TMP CVR? - Imibuzo Evame Ukubuzwa
Main > Imibuzo Evame Ukubuzwa > Amafayela we-tmp cvr - izimpendulo ezilula zemibuzo
Amafayela we-tmp cvr - izimpendulo ezilula zemibuzo
Ngilivula kanjani ifayela le-TMP CVR?
Ungakhetha futhi ukubuka ifayela le-Ifayela le-CVRukuhlaziya nokuthola ukuthi kungani uhlelo lweMicrosoft luphahlazekile kusistimu yakho.
Chofoza u-'Qala, '' Zonke Izinhlelo 'bese uchofoza u-'Microsoft Word.'
Chofoza inkinobho ethi 'Windows Office' kusuka ekhoneni eliphezulu kwesobunxele leZwi bese uchofoza 'Vula. '
Ingabe KULUNGILE ukususa amafayela we-TMP?
Agcinwa enkombeni engu- \_ AppData \_ Local \_ Temp \_. Yebo, Ungakwenzasusa ngokuphephakubo.
Sawubona YouTube. Lokhu yiPraveen yeTechEmpty. Lapha kule ndatshana, ngizokukhombisa inqubo yokususa amafayela we-cache noma we-junk ukuhlanza yakho Windows 10 ikhompyutha ngesandla.
Ngiphakamisa ukuthi wenze isipele kuwo wonke amafayela akho abalulekile asefolda yesikhashana, njengamafayela ahlobene nomdlalo noma idatha yomdlalo egciniwe. Ngakho-ke, ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale. Okokuqala, ake sisule idatha yokuvuselela iWindows.
Ukuze wenze lokhu, vula idrayivu C, bese kuba yiWindows, bese kuba yi-Software Distribution bese ukhetha okuthi Landa lapha. Sine-1 gig yedatha yokuvuselela iWindows futhi asiyidingi. Uma uhlelo ludinga ifayela, luzolandwa futhi.
Ngakho-ke azikho izinkinga. Ake ngisuse yonke into lapha kule folda yokulanda ukuze ngisuse amafayili angenamsoco ukuze ngihlanze Windows 10 ikhompyutha manje eyesibili masisuse amafayela wesikhashana & we-prefetch ukwenza lokhu, ukuvula ngokuvula ngokuchofoza kwesokudla kusithonjana sewindows bese ukhetha 'run' lapha , faka i-% temp% lapha bese ukhetha ok, manje uzobona wonke amafayela wesikhashana bese uwasusa wonke ngokugcina noma yimuphi umsebenzi owenzile wenza olunye lwezinhlelo zokusebenza. Vula ukugijima futhi ngokuchofoza kwesokudla isithonjana seWindows futhi manje vele uthayiphe ku-temp.
Le enye indawo lapho amafayela wesikhashana agcinwa khona. Vele ususe konke ukuhlanza indawo yesikhashana. Manje ake sisuse amafayela we-prefetch.
Ukuze wenze lokhu, vula ibhokisi lengxoxo le-Run ngokuthayipha okhiye beWindows + R bese uthayipha i-prefetch ngasikhathi sinye. Lapha, khetha wonke amafayela namafolda bese uwasusa. Ungawasusa kanjani amafayela angenamsoco wokuhlanza kwakho Windows 10 ikhompyutha.
Manje owesithathu. Uma unezinkinga nge-Windows Store, vele ukwenze ngaphandle kokushintsha izilungiselelo ze-akhawunti yakho noma ususe noma iziphi izinhlelo zokusebenza ezifakiwe. Ngokuvula ibhokisi lengxoxo le-Run, thayipha i-wsreset bese uqhafaza KULUNGILE, umyalo we-oda uzoza nesikrini esingenalutho.
Kuzodingeka ulinde imizuzwana embalwa ukuqedela inqubo yokusetha kabusha. Uma usuqedile, uzothola Isitolo seWindows kukhonsoli. Okwesine, kuzosula umlando wokuphequlula we-Microsoft Edge ne-Chrome ngenkathi nginazo.
Ungazama ukusula umlando wokuphequlula wazo zonke iziphequluli onazo. Manje iya kusiphequluli se-Edge, sivule bese ukhetha lawo machashazi amathathu lapha bese ukhetha Amasethingi. Manje chofoza phakathi ngaphansi kokuthi 'Sula idatha yokuphequlula' ku 'Khetha okufanele kususwe'.
imicrosoft frontpage downlaod
Thika ukuthi ufuna ukusula ini bese ukhetha okuthi 'Susa'. Ngenye indlela, ungakhetha inketho ethi 'Sula ngaso sonke isikhathi lapho ngivala isiphequluli' uma ufuna ukusula idatha yokuphequlula ngezikhathi ezithile ukuze ususe amafayela angenamsoco ukuhlanza ikhompyutha yakho ye-Windows 10 Kusiphequluli se-Chrome, landela lezi zinyathelo ukusula umlando wakho wokuphequlula. Vula i-Chrome bese ukhetha lawa machashazi amathathu ukunweba izinketho ezitholakalayo.
Khetha 'Amathuluzi amaningi' kumenyu, bese 'Sula idatha Yokuphequlula'. Uzothola iwindi ngezinketho eziyisisekelo, uye kuthebhu 'Okuthuthukile' bese ukhetha isikhathi, yiziphi izinto ofuna ukuzisusa njll. Bese uqhafaza ku-'Sula Idatha '. lo myalo wokusula i-cache ye-DNS.
Ukuze wenze lokho, thola cmd bese uqhafaza kwesokudla kuso ukuze usebenzise i-Command Prompt njengomlawuli. Manje faka umyalo olandelayo; ipconfig / flushdns futhi izokusula ngokushesha isilondolozi se-DNS. Okwesithupha ukuhlanza i-hard drive bese uyivula, khetha i-hard drive ofuna ukuyihlanza futhi lapha ngikhetha idrayivu C.
Manje khetha amafayela ofuna ukuwahlanza bese ukhetha ok, kuzobe sekuhlanza amafayela angenamsoco atholakala kudrayivu C. Okwesikhombisa ukukhulula isikhala ngephuzu lokutakula. Ukuze wenze lokhu, thola iphuzu lokubuyisela bese ulivula.
Lapho usunayo iwindi le-System Restore Point, khetha i-C drive bese ukhetha u-'Lungiselela 'ukucinga isikhala esisetshenziswe endaweni yokubuyisela. Manje senginama-gigs angaba ngu-2 lapha futhi konke okumele ukwenze ukukususa ngokukhetha u-Delete bese ucindezela u-OK. Manje dala iphuzu lokubuyisela elisha bese uliqamba noma yini oyithandayo.
Ngikubiza ngokuthi ukutakula lapha futhi kuzothatha isikhala esincane manje. Nakhu ukuthi ungasusa kanjani amafayela we-cache noma we-junk ukuze uhlanze yakho Windows 10 ikhompyutha ngesandla ngaphandle kokusebenzisa noma iyiphi isoftware. Yilokho kuphela kwalesi sihloko esifushane.
Ngiyethemba uthole ukuthi le ndatshana ilusizo. Uma wenza kanjalo, sicela ushaye inkinobho ethi 'Like' bese ubhalisela lesi siteshi ukuthola izindatshana ezinhle njengale. Umnikelo wakho ungaphezulu kithi.
Lokhu kuyizimpawu zePraveen. Ngiyethemba ukukubona esihlokweni esilandelayo. Ngiyabonga!
Ingabe ifayela le-tmp liyigciwane?
TMPkuyasebenzaifayelailandiwe futhi isetshenziswe yiigciwane, Isaziso se-Fake Microsoft Security Essentials. ... Inkohliso ye-Microsoft Security Essentials izama ukwenza lokhu ngokugcwalisa ikhompyutha yakho ngezixwayiso ezivelelayo ezikutshela ukuthi ikhompyutha yakho ithelelekile.Sep 28 2017.
Ngenzani ngamafayela we-TMP?
IningiAmafayela we-TMPazenzelwe ukuvulwa. Ngenkathi ungavula ifayela le-Ifayela le-TMPku-Microsoft Notepad (Windows) noma omunye umhleli wombhalo, iifayelakungahle kungafundeki kumuntu. Ngokuvamile,Amafayela we-TMPziyasuswa ngemuva kwalokhu: Uhlelo lokusebenza olwenze ifayela le-ifayelaiqeda ukusebenzisa i-ifayela.
Ngiwatholaphi amafayela wesikhashana we-CVR * .tmp.cvr?
I-CVR * .tmp.cvr Amafayela Esikhashana adalwe yizinhlelo ze-Microsoft Office ezibandakanya i-Outlook, iZwi, i-Excel, i-PowerPoint, njll. Itholakala kufolda yabasebenzisi & lt; userid & gt; AppDataLocalTemp. Ngaso sonke isikhathi lapho uqala uhlelo lweMicrosoft Office, luzokwakha iCVR * .tmp.cvr enezinombolo ezi-4 ezingahleliwe ze-Hex phakathi kwegama lefayela njenge: CVRD5F9.tmp.cvr.
Liyini ifayela le-CVR Temp ekubukeni?
Amafayela wesikhashana we-CVR amafayili wesikhashana ashiywe yizinhlelo ezinjengeMicrosoft Outlook kanye nezinye izinhlelo ezivela ku-Microsoft Office Suite. Thola ngamafayela wesikhashana we-CVR ngosizo oluvela kuchwepheshe wezinhlelo zolwazi, izilimi zokuhlela, ukuthuthukiswa kwewebhu nokuphepha kwenethiwekhi kule vidiyo yamahhala. Ingcweti: uLucas Mladek
Ifayela elinjani ifayela le-CVR?
Uhlobo lwefayela lesikhashana. Isandiso sefayela le-cvr sisetshenziswa ezinye izinhlelo ezivela ku-Microsoft Office suite, njenge-Microsoft Outlook yolunye uhlobo lwamafayela abo esikhashana.
Kuphephile yini ukususa ifayela le-CVR?
Amafayela we ~ / $ abizwa ngamafayela wabanikazi, adalwa lapho usebenza nedokhumenti ku-Word, futhi kufanele isuswe lapho ugcina idokhumenti yakho futhi uphuma ku-Word. Amafayela we-.CVR adalwe yi-Outlook. Zigcinwa enkombeni ye- AppData Local Temp . Yebo, ungazisusa ngokuphepha.